Dhagayso:- Shirka Baydhabo oo la sheegay in Dhibaato ay ku Hayaan Beelaha Hawiye | Saadaal Media	Friday, March 7th, 2014	Home
Dhagayso:- Shirka Baydhabo oo la sheegay in Dhibaato ay ku Hayaan Beelaha Hawiye
Feb 5, 2014 - 17 Jawaabood	ShareWaxaa kasoconaya Magaalada Baydhabo ee Xarunta gobalka baay shir Balaaran oo maamul logu samaynayo Lix gobal sida ay shegeen Hogaamiyaasha horboodaya shirka.
Muqdisho waxaa ka furmay shir la sheegay in maamul loogu samaynayo gobalada shabeelooyinka,sida shabeelaha dhexe iyo shabeelaha hoose,kaas oo ay wadaan siyaasin ,xildhibaano iyo Aqoonyahano kasoo jeeda gobaladaas.
Dhinaca baydhabo shirka kasocda ayaa waxaa la sheegay in faragalin xoogan ay ku hayaan beesha madaxweyne xasan sheekh,kaas oo odayaaha dhaqanka ay ku tilmaamen mid ka baxsan shuruucda faderaalka ah.
Afhayeenka Odayaasha Koonfur Galbeed Malaaq Maxamed Yacquub Malaaq Deerow oo la hadlayeey warbaahinta koonfur galbeed ayaa shegay in shirka baydhabo uu marayo marxaladihii ugu dambeyeey isagoo shegay in shirka ay soo garayaan wafuud kala duwan oo ay shegeen in ay ka imaanayan gobalada jubbooyinka iyo shabeelooyinka.
Malaaqa ayaa shegay in shirka kadhacay Muqdisho ee lagu samaynayo maamul ka kooban gobalada shabelooyinka uu yahay mid Riyo ah oo ay kadambeyaan Madax katirsan Dowlada.
Afhayeenka Odayaasha Koonfur Galbeed Malaaq Maxamed Yacquub Malaaq Deerow Ayaa shegay in shirkaas uu marnaba saamayn ku yeelan donaan shirka kasocda baydhabo.
Hoos Kadhagayo waraysi uu siyeey warbaahinta koonfur Galbeed
Fadlan Fikir kaaga Ha'ahaado Mid Bulshada Waxtar u leh Fikradaha Akhristayaasha (17)
Rooble says:	February 5, 2014 at 12:22 am	Raxenwaayn somaliya fadliga hawiye iyad ku joogteen hadii aad kibirteen hadee waaxa la idiin targilaya meeshi aad ka timaadeen.
Reply »	biimalkingdom says:	February 5, 2014 at 1:44 am	WAX LA YIRAHDO HAWIYE MA JIRO MORIYANTA HABAR GIDIR BA INDHO IYO MASKAX U NOQOTAY BESHI HAWIYE OO AN NAQANAY NASABKA AHEYD MA JIRTO O WAXA HIGANKA U QABTAY GUNTI MORIYANGIDIR AHEYD AYAGA AYANA LOO DOON DOONAYA DHUL AY DEGAAN SIDAA DARTED YAN LOO JOOJIN NINKII DHOOF KU YIMID BAY GEERIDU DHIMEYSA KOONFUR GALBED AXA UU QUUSINAYA RAJADI MOORIYANTA MEL AY KU GAMBANEYSANA MA JIRTO BAL AN ARAGNO NINKI AY GERIDU DHIBEYSO
Reply »	rasman says:	February 5, 2014 at 12:26 am	Magan Allah eelay wiiq. Galla madow waa wada alshabab. Waagu markuu baryo magorodoo magoorodo ma aqaane nijaasyahow af-muslim ama afgaaloo
Reply »	Aliyow says:	February 5, 2014 at 1:25 am	Rooble iyo Rasman hadalada aad ku hadleysaan waa “Gaalnimo” khaalis ah. Ruux kasta oo dhasha Illaah Fadligiisa ayuu ku nool yahay, “Hawiye” kulaah, Falciyaadu Bilaah. Hadii Hawiye Illaahyo idin yihiin idinkey idin jirtaa.
Mida kale waxaad la gubaneysaan waa xaqii oo soo daahirey, dulumkkii oo suuliya ayaad u jeedaan. Isku duubnimada Koonfurgalbeed waxay xoojineysaa Somalinimada, Carabnimada iyo Islaamnimada.
Viva SWS and Somalia
Reply »	abdifatah says:	February 5, 2014 at 3:22 am	aliyoow dulmi elaay kaweyn maanta soomaaliya kamajira hawiyana waa dad soomaali ah wixii isqab qabsi keenaayo maaqbalikaraan oo dibnoogucelinaayo 20sano kahor maxaa yeelay baydhabo dadka fadhiyow arintan maxaa barikaimaankara mabkufikiraayaan.
Reply »	Aliyow says:	February 5, 2014 at 5:15 am	Abdifatah horta iska ilaali ereyga “Elaay” markaad rabto inaad ka hadasho waxa ka socda Baydhabo. Elaay waa hal qabiil oo ka tirsan Qowmiyada DM.
Mida xigta Baydhabo Somaliweyn oo dhanbaa joogta oo qabiilkasta leh marka laga reebo kuwa aan deegaan wadaagta ahayn. 20 sano wixii lagu jirey baa lagu laaban rabaa, hadii 20sano dulmi lagu jirey maxaa dhibayo in lagu sii jiro 50 sano oo kale hadiiba adiga iyo kuwa qabyaalada dilootey aananba XAQ rabin.
Shirkaas XAQ baa looga hadlayaa, ee XAL loogama hadlayo. Waxaan jooga cuqaal, shiyukh, waxgarad oo kor u dhaaftey 1000, intaas ma dadkiina webka wax ku qora ma ka caqli badan tihiin, mise dowlada oo 400 qof aan ka badneyn?
Markaad wax qoreyso si cilmeyeysan wax u soo qor. XAQ baa loo socdaa, Xal looma socdo. Cidii XAQ rabta miiska hasoo fadhiisato, balse XAQ dad uu leeyahay qofna XAL looma siin karo.
VIVA KG and Somalida XAQ jecel
Reply »	gabar gaaljecel from gudhaa says:	February 5, 2014 at 8:25 am	HAWIYE MA NUUGO LAGAMA NUUGO war wax isku falla dadka dantooda gartayna faraqa haku dhagina
Reply »	gantal says:	February 5, 2014 at 8:30 am	aliyow xaqa kusiisay in aad sheekato lix gobol dadka kalana kaceliyay bal noo sheeg? tankale soo malia mahaday dhalatay 25 sana burbur baa kasocday 21 sana dowladi kacaanki baa kasii horaysay 10 sana tii waxaa kasii horaysay lasoo dooran jiray intaas iyo xiligi gumestaha maan arkin digil iyo mirif leh lex gobol baan aniga mas uul ka ahay, kumana lihi wax kama dagtaan dabcan dhulka somalida inta badan waa wada gantahay laakiin waa lagu kala badan yahay melaha qaar marka hadaad xaq doontahay meshaad kubadan tahay dadka kuhogaami dadka kuladagana xuququ dooda sii, meshi laagaga badan yahay sidoo kale cidii kaaga badan baa kuhogaamin xuquqdadana karaadso in taa wixi aan aheen dee adaa noo fasiri good luck
Reply »	Aliyow says:	February 5, 2014 at 9:51 am	Gantal, burburka ka hor ma dowlado cadaalad ku dhisan baa ka jirey Somalia? Hadii aadan is indhatireyn, intaan xuriyada la qaadan waxaan ku doodeyney in Federal la qaato, waqtigaas proposalka wuxuu ahaa Ilaa Arbaca Rukun. Taariikhda laga qorey ee xornimada iyo nidaamka dowliga iyo qowmiyadaha Somalia dib u raac.
Ka dib 1995 ayaa markale boorka laga jafay oo lagu heshiiyey in lixda gobol la dhiso waxaana la doortey Avv Xasey AUN oo dhowaan geeriyoodey, Ceydiid iyo nabadiidkiisa ayaa burburiyey.
Hadan 2001 ayaa la sameeyey C/Qasim Salaat ayaa burburiyey.
Hadii mediyaha la idinku baray waxa la yiraahdo “Bay iyo Bakool”, waxaa laga yaabaa inaad ka mid tahay dadka la liqsiiyey.
Dhulka waa lakala degaa, balse degaan aan dad lahayn ma jiro. Maad aragtid beel ka soo jeeda DM oo sheeganaysa Garowe ama Burco iwm?
Mapka dalka kala baro, tuulo tuulo u baar, magac ahaan iyo dad ahaanba. Meesha la igaga badan yahay sida Garoowe, Galkacyo, Hargeysa dadkoodan uga dambeeyaa, balse keygana haleyga dambeeyo.
Waxaan kuu sheegayaa in maamulka laga soo wado KG uu cadaalad u horseedi doono dadka wada dega lixda gobol.
Reply »	gantal says:	February 5, 2014 at 10:12 am	calow waxaan soconaynin hadaad wakhti isga lumiso adiga ayay kutaala hadaad leedhay haegaysa iyo garawe ayaan dagaa yes hadaad kawado mudhin somali baan ahay dhulka soomaliyed xaqbaan kuleyahay min raas caser ilaa kamboni waa dhul
soomaliyed caqliga slimka ah qof walba oo soomali ah xaq buu kuleyahay, tan aan kahadlayno ee xafadaysiga ah somali waxay kuu taqaan gobol kaa bay in aad dagan tahay bakol na lagula dago intaa wixii kasoo haray dadka kaaga badan baad ooga danbayn hadii kale hade wadanka dhan iska sheego oo dheh dadka waa wada digil iyo mirif marka siiradan aad wadato intaad iska dhaafto dansahada qabso oo hogaami
labadaa gobol hadaadba hogamin karto oo aad xoog iyo dhaqaalihi lagu dhisi lahaa hayso
Reply »	Maquuste says:	February 5, 2014 at 11:51 am	Subxanallah hawiye illah malahan waxayna kucan baxen isku dirka iyo kala firdhinta beelaha somaliyed maxa kaquseya lixda gobol dad ba utashanoya oo xalkeda ufadhiya anga hadanahay qomyahdaha D&m in badan dhibkiina wan so aragnay oo inbadan ba naqaribten oo nagu so gardarooteen aduunkana wax walbo wu lasocda madixina meshad dhigi laheydenba la idinka raba hadana waxan diyar unahay inan idin laayno naagihiina aan kufsano dalka an idinka saarno ragiina aan qudha kawada jarno ciyaalkiina aan wada qowracno markaasi baa la idin kanasan doonaaye
Reply »	abdifatah says:	February 5, 2014 at 12:17 pm	aliyoow nin dhagool ayaa garqaatey wuxuu yiri inaan gardaranahey dadka oo dhan ayaa farta iigufiiqaaye qoomiyad dhan dhagool makatalaxumaankaraan dalaalida aad kusheegatey lixgobol waa laciif ee soomaali iyo aduunka ayaa fartakugufiiqey intaaskabadan maxaa laidinkusameenlahaa.
Reply »	Hiraab says:	February 5, 2014 at 3:31 pm	Malaaq to Malaaq !!!!!!!!!!!
Waligiinba hadla shabeelooyinka waxaad tihiin dadka ugu yar oo dega, markaas ayaad rabtiin inaad carqaladeysaan Midowga 2da shabeele oo weligood mideysnaa!!!
Wallalayaal kaa laya oo maamulka wax ku yeesha hadeysan aheyn cirka soo taabta !!!
Reply »	Boqor baashi says:	February 5, 2014 at 4:34 pm	War hawiye maxa laga raba. Oo waxay rabaan hasameystaano jidki aan laraadinayey hadda ayey kusoo dhaceen. Run umaleeya hawiya dhib nagu haya. Kkkkk dhacala qabaadkiin kuyaal walaahi waxan keliyo rabnaa inaan qiil ugaraadino dhiigiina. Waxa lagaaray xilligi bakhtiyadiini jidka laga aruurin lahaa ee kudhiirada mowqifkiina. Mida kale waa wada alshabaab baa mid idin kamid ah yiri. Waa run waxan nahay ilka abeeso hoosbay kaxariiran midkeena ashabaabta ah iyo keena askariga ah iyo shacabkayaga waa isku mamda’ waxaynu rabna qudha inaan idinka wada jarno bahaahin bahaahin dhashay. Waa balan inaan madaafiic idin ku garaacno har iyo habeen. Wlhi inaan sheeko idinka dhiganeynu dhacala idin dhalaye kkkkkkkk
Reply »	nuur says:	February 5, 2014 at 5:30 pm	eelayda damdamtooda waa lala socdaa.colaada ay hurinayaan waxay waayi doonaan bay iyo inta yar ee ay ka dagaan bakool.waa laga war dhawrayaa halkay ku furaan
Reply »	xaliye says:	February 6, 2014 at 7:43 am	cali calyow haddaan kooyey buu leeyahay ama dhashay e waxba hawiye afka ha ku taagina e oo kala bar dhulkii soomalida qaadatay ayaa dooni in ay ku darsato baydhbona e lixda gobal ha kuu dambayso e iyaga ka soo lug bax.
Reply »	xaliye says:	February 6, 2014 at 7:45 am	cali calyow haddaan kooyey buu leeyahay ama dhashay e waxba hawiye afka ha ku taagina e Iljeex oo kala bar dhulkii soomalida qaadatay ayaa dooni in ay ku darsato baydhbona e lixda gobal ha kuu dambayso e iyaga ka soo lug bax.
Latest News	Dhagayso:- Ciidamada AMISOM oo Al-Shabaab ka saaray Xudur
Dhagayso:- Odayaasha Guurtida Caabudwaaq oo Si adag Uga Horyimid Shirka Maamul u samaynta gobalada Dhexe ee Muqdisho Kasocda
- Mar 7, 2014	Odoyaasha Guurtida Dagmada Caabudwaaq Oo Wax Laga Xumaado Kutilmaamay Shir Lagu Doonayo In Maamul Goboleed ...
Dhagayso:- Ciidamo Dheraad ah oo ah Mucaaradka Jubba oo Tuulada Goobweyn Gaaray iyo Xaalada oo Kacsan
- Mar 7, 2014	Tuulada Goobweyn ee duleedka Waqooyi maglaada Kismaayo ee xarunta Jubbada Hoose waxaa la sheegaya ...
Dhagayso:- Salebaan ciise xagla toosiye oo Kasoo Goostay somaliland
- Mar 7, 2014	Siday ku soo baxayaan wararka naga soo gaaraya dhankaas iyo maamulka la baxay soomaaliland ...
Dhagayso:- Taliska somaaliland oo ka Hadlay Dil loo geeystay Gabar Hargeysa ku nolaayd
- Mar 7, 2014	Cabdullaahi Fadal Iimaan Taliyaha Ciidamada Booliska Somaliland ayaa sheegay in Taliskooda maalinnimada Sabtida ah ...
Dhagayso:- Shir Xasaasi ah oo Kadhacay Muqdisho Kaas oo Dowlada Federaalka Loga soo Horjeeday
- Mar 6, 2014	Waxaa caawa Hoteelka Amiira ee Magaalada Muqdisho kadhacay Shir Xasaasi ah ay isugu yimaadeen ...
Dhagayso+Sawiro:- Turkiga oo Mashaaric kala Duwan Puntland ka Fulin Doona
- Mar 6, 2014	WAR-SAXAAFADEED
Khamiis 06 March, Garowe:- Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo masuuliyiinta ...
Dhagayso:- Madaxweyne Xasan sheekh oo Wafuud Caalami ah Maanta kala Hadlay shirarka Baydhabo
- Mar 6, 2014	Wafdi ka socday Qaramada Midoobay, ,Midowga Yurub, Midowga Afrika, IGAD iyo danjirayaasha dalalka caalamka ...
Daawo Sawiradda:- Soodhaweyntii iyo booqashadii Garowe Safiirka Turkiga ee Somalia
- Mar 6, 2014	afiirka Turkiga u qaabilsan Soomaaliya mr oo ay weheliyaan Madaxda Sare ee Puntland iyo ...
Madaxweynaha Puntland Cabdiweil Gaas oo Ciidamo AMISOM Ah Dalbaday (Warbixin)
- Mar 6, 2014	Madaxweynaha maamulka Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa wakaalada Wararka Reuters qadka Taleefanka ugu ...